Diego Godín oo weerar ku qaaday Cristiano Ronaldo, kaddib imaatinkiisa kooxda Inter Milan – Gool FM
Diego Godín oo weerar ku qaaday Cristiano Ronaldo, kaddib imaatinkiisa kooxda Inter Milan
(Italy) 27 Luulyo 2019. Daafaca dhawaangalka ah kooxda Inter Milan ee reer Uruguay Diego Godín ayaa weerar ku qaaday weeraryahanka Juventus ee Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo ayaa muran xoogan dhaliyay kaddib markii uu dabaaldeg aan habooneyn ku hor sameeyay jamaahiirta Atletico Madrid, kulankii lugta labaad ee wareega siddeed dhamaadka Champions League ay ku wada ciyaareen kooxaha Juventus iyo Atletico Madrid xili ciyaareedkii tagay.
Diego Godín ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “CalcioMercato” ee dalka Talyaaniga wuxuu ku sheegay:
“Diego Simeone wuxuu sameeyay dabaaldeg la mid ah kan Ronaldo, laakiin waxay ahayd mid ku socotay taageerayaasheena”.
“Balse dabaaldegii Cristiano Ronaldo aad ayuu kaga duwanaa, wuxuu ixtiraam daro u muujiyay taageerayaasha kooxda Atletico Madrid”.
Yeelkadeeda, Diego Simeone ayaa si cajiib ah u dabaaldegay kulanki lugta hore ee wareega siddeed dhamaadka Champions League, kaddib markii ay Juventus kaga adkaadeen 2-0, taasoo ka dhigtay Cristiano Ronaldo inuu sameeyo dabaaldeg la mid ah macalinka reer Argantina, kaddib markii uu saddexleey dhaliyay kulankii lugta labaad, balse wuxuu si jees jees ah ugu hor sameeyay taageerayaasha Atletico Madrid.
Uganda oo jug culus u geysatay xulkeena qaranka soomaaliya